ဘ၀ကြီးမှာရှင်သန်နေထိုင်ရတာပင်ပန်းလိုက်တာလို့တွေးမိတဲ့အခါ ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်ပါ – Trend.com.mm
Posted on April 5, 2018 October 12, 2018 by Noel
ဘ၀ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများက ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးတွေ မိသားစုကိစ္စတွေ၊စီးပွားရေးကိစ္စတွေစသဖြင့် ဘ၀မှာအဆင်ပြေပြေနေထိုင်ရဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့ အချိန်မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ပင်ပန်းမောပန်းမှုတွေ၊နားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ သင့်ရဲ့ နေ့ရက်တွေထဲမှာရော ပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့နဲ့ စိတ်ရှုပ်ရတဲ့နေ့ အချိုးကျရဲ့ လား? နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတွေဝေငေးမောစွာချခဲ့ရပြီး သက်ပြင်းတွေ အခါခါရှိုက်ခဲ့ရပြီးပြီလဲ?
အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေရတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာထက် တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရမှာပါ။ဘ၀က ရှင်သန်ရတာပင်ပန်းတယ်လို့ခံစား
ဘာဖြစ်လို့စိတ်ပင်ပန်းနေတာလဲ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာလဲ ဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေပြီး ဘာတွေကို မလုပ်ရသေးမှာတွေးကြောက်နေတာလဲ?စဉ်းစားကြည့်ပါ။တကယ်တော့ ကိုယ်တွေရဲ့ အတွေးတွေကြောင့်ပဲစိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတာပါ။ဘ၀ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းမြင်စိတ်ထားပါ။ပြုံးပါ။တရားထိုင်ပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ။တစ်ခြားအရာတွေကိုအသေးစိတ်ကအစ တွေးတောဂရုစိုက်နေတာကိုရပ်လိုက်ပြီး သင့်ကိုယ်သင်ဂရုစိုက်လိုက်တာက ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့နိုင်မယ့်လမ်းစပါ။ပူပန်သောကဖြစ်နေတာတွေ အားလုံးကိုလွှတ်ချလိုက်ပါ။ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်တတ်နိုင်သလောက် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ သင်တတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီးဂရုစိုက်ပေးချင်တဲ့အခါ၊ဂရုစိုက်ပေးရတဲ့အခါ ပိုပြီးစိတ်မောလူမောဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အောင်မြင်မှုရဖို့ခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ရမယ်လို့ထင်ကြတယ်။အရင်တည်းက ခက်ခဲမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ အောင်မြင်မှုဆိုတာရမှာလို့ စိတ်ထဲက သိထားကြလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ရင်လည်းအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဆိုရင် ဘာလို့ခက်ခဲတဲ့လမ်းကို ရွေးနေဖို့လိုမလဲ?အမြဲတမ်းလိုလိုဘ၀မှာရွေးချယ်စရာတွေကရှိနေမှာပါပဲ။စဉ်းစားရမှာက ကိုယ်ကခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီလားဆိုတာပါပဲ။
၃)တစ်ခါတစ်လေ ငြင်းလိုက်တာက ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်လာတယ်
သင့်ဘ၀မှာအရေးမပါတဲ့ကိစ္စတွေကို ဘယ်နှစ်ခါများ အားနာနာနဲ့မလုပ်ချင်ပဲ လုပ်ပြီးခဲ့ပြီလဲ? ကိုယ်ဆန္ဒမပါတဲ့ကိစ္စကို မလုပ်ပါနဲ့။သင့်ရဲ့ အချိန်တွေကို အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် အကုန်မခံပါနဲ့။ငွေကြေးရဖို့အတွက်နဲ့ အားလပ်ရက်မရှိ ဘ၀ကိုမကုန်ဆုံးပါနဲ့။ ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကို နိုးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန်တွေအစား ၊အဲ့ဒီအလုပ်တွေအစား ကိုယ့်အတွက်အရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေကိုသာ အာရုံစိုက်ပါ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုမျှဝေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ရဲ့ ဝင်ငွေလေးနဲ့ ကုသိုလ် အကျိုးပြုလိုက်တာကိုပြောတာပါ။ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ပါမှာက ကုသိုလ်ဒါနပဲရှိတာပါ။ ကိုယ်ရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကို ငွေကြေးလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေ ၊ငွေကြေးနွမ်းပါးတဲ့သူတွေအတွက်ကုသိုလ်လုပ်ပါ။ဒါက သင့်စိတ်ကိုအေးချမ်းပျော်ရွှင်စေသလို သင့်ကုသိုလ်အတွက်တစ်ခြားသူတွေကလည်းပျော်ရွှင်မှုရပါလိမ့်မယ်။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ရိုးရှင်းတဲ့ဘ၀ဆီကိုပဲ လာတာပါ။အဓိကက ဒီသုံးချက်ကိုမှတ်ထားဖို့ပါပဲ။ ဂရုစိုက်မှုနည်းပါစေ၊နိုးလို့ငြင်းနိုင်ပါစေ၊နေ့စဉ်ဘ၀အတွက်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကိုသာချနိုင်ပါစေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သင့်ဘ၀က ပိုပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
ဘဝရဲ့ အခြိနျတျောတျောမြားမြားက ရှုပျထှေးမှုတှနေဲ့ပဲ ပွညျ့နတေတျပါတယျ။ အခဈြရေးတှေ မိသားစုကိစ်စတှေ၊စီးပှားရေးကိစ်စတှစေသဖွငျ့ ဘဝမှာအဆငျပွပွေနေထေိုငျရဖို့ကွိုးစားနရေတဲ့ အခြိနျမှာစိတျဖိစီးမှုတှေ၊ပငျပနျးမောပနျးမှုတှေ၊နားလညျဖို့ခကျခဲတဲ့အဖွဈအပကျြတှကွေုံလာရနိုငျပါတယျ။ပွီးဆုံးခဲ့တဲ့ သငျ့ရဲ့ နရေ့ကျတှထေဲမှာရော ပြျောရှငျရတဲ့နနေဲ့ စိတျရှုပျရတဲ့နေ့ အခြိုးကရြဲ့ လား? နစေ့ဉျဘဝမှာ ဘယျလိုဆုံးဖွတျခကျြတှကေိုတှဝေငေေးမောစှာခခြဲ့ရပွီး သကျပွငျးတှအေခါခါရှိုကျခဲ့ရပွီးပွီလဲ?
အမွဲတမျးပြျောရှငျနရေတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာထကျ တကယျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ပြျောရှငျမှုကို ကိုယျကိုယျတိုငျရှာဖှရေမှာပါ။ဘဝက ရှငျသနျရတာပငျပနျးတယျလို့ခံစားနရေတဲ့အခါ ဒီအခကျြလေးတှအေတိုငျးတှေးကွညျ့နကွေညျ့ပါ။
ဘာဖွဈလို့စိတျပငျပနျးနတောလဲ စိတျရှုပျထှေးနတောလဲ ဘာတှကေိုစိုးရိမျနပွေီး ဘာတှကေို မလုပျရသေးမှာတှေးကွောကျနတောလဲ?စဉျးစားကွညျ့ပါ။တကယျတော့ ကိုယျတှရေဲ့ အတှေးတှကွေောငျ့ပဲစိတျမောလူမောဖွဈနရေတာပါ။ဘဝကိုရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးခငျြတယျဆိုရငျအကောငျးမွငျစိတျထားပါ။ပွုံးပါ။တရားထိုငျပါ။ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြပါ။ကိုယျ့ကိုယျကိုယျဂရုစိုကျပါ။တဈခွားအရာတှကေိုအသေးစိတျကအစ တှေးတောဂရုစိုကျနတောကိုရပျလိုကျပွီး သငျ့ကိုယျသငျဂရုစိုကျလိုကျတာက ပြျောရှငျမှုကိုတှနေို့ငျမယျ့လမျးစပါ။ပူပနျသောကဖွဈနတောတှေ အားလုံးကိုလှတျခလြိုကျပါ။
တဈခါတဈလေ အောငျမွငျမှုရဖို့ခကျခဲတဲ့လမျးကိုရှေးခယျြရမယျလို့ထငျကွတယျ။အရငျတညျးက ခကျခဲမှုတှကေိုဖွရှေငျးနိုငျမှ အောငျမွငျမှုဆိုတာရမှာလို့ စိတျထဲက သိထားကွလို့ပါ။ ဒါပမေဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့လမျးကိုရှေးခယျြရငျလညျးအောငျမွငျမှုရနိုငျတယျဆိုရငျ ဘာလို့ခကျခဲတဲ့လမျးကို ရှေးနဖေို့လိုမလဲ?အမွဲတမျးလိုလိုဘဝမှာရှေးခယျြစရာတှကေရှိနမှောပါပဲ။စဉျးစားရမှာက ကိုယျကခကျခဲတဲ့လမျးကိုရှေးခယျြမယျဆိုရငျ အဲ့ဒီလမျးကိုသှားဖို့ပွငျဆငျပွီးပွီလားဆိုတာပါပဲ။
၃)တဈခါတဈလေ ငွငျးလိုကျတာက ပိုပွီးအရေးကွီးတဲ့ကိစ်စတှကေို အာရုံစူးစိုကျနိုငျလာတယျ
သငျ့ဘဝမှာအရေးမပါတဲ့ကိစ်စတှကေို ဘယျနှဈခါမြား အားနာနာနဲ့မလုပျခငျြပဲ လုပျပွီးခဲ့ပွီလဲ? ကိုယျဆန်ဒမပါတဲ့ကိစ်စကို မလုပျပါနဲ့။သငျ့ရဲ့ အခြိနျတှကေို အရေးမကွီးတဲ့ကိစ်စတှအေတှကျ အကုနျမခံပါနဲ့။ငှကွေေးရဖို့အတှကျနဲ့ အားလပျရကျမရှိ ဘဝကိုမကုနျဆုံးပါနဲ့။ ကိုယျမလုပျခငျြတဲ့ကိစ်စတှကေို နိုးလို့ ပွတျပွတျသားသားငွငျးလိုကျပါ။ အဲ့ဒီအခြိနျတှအေစား၊အဲ့ဒီအလုပျတှအေစား ကိုယျ့အတှကျအရေးပါတဲ့ကိစ်စတှကေိုသာ အာရုံစိုကျပါ။
ပြျောရှငျမှုကိုမြှဝတေယျဆိုတာ ကိုယျတတျနိုငျသလောကျ ကိုယျ့ရဲ့ ဝငျငှလေေးနဲ့ ကုသိုလျ အကြိုးပွုလိုကျတာကိုပွောတာပါ။ကိုယျ့ဘဝအတှကျ ပါမှာက ကုသိုလျဒါနပဲရှိတာပါ။ ကိုယျရတဲ့ဝငျငှရေဲ့ အစိတျအပိုငျးအနညျးငယျကို ငှကွေေးလိုအပျနတေဲ့နရောတှေ ၊ငှကွေေးနှမျးပါးတဲ့သူတှအေတှကျကုသိုလျလုပျပါ။ဒါက သငျ့စိတျကိုအေးခမျြးပြျောရှငျစသေလို သငျ့ကုသိုလျအတှကျတဈခွားသူတှကေလညျးပြျောရှငျမှုရပါလိမျ့မယျ။
ပြျောရှငျမှုဆိုတာ ရိုးရှငျးတဲ့ဘဝဆီကိုပဲ လာတာပါ။အဓိကက ဒီသုံးခကျြကိုမှတျထားဖို့ပါပဲ။ ဂရုစိုကျမှုနညျးပါစေ၊နိုးလို့ငွငျးနိုငျပါစေ၊နစေ့ဉျဘဝအတှကျရိုးရှငျးပွီးအသုံးဝငျတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ကိုသာခနြိုငျပါစေ။တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သငျ့ဘဝက ပိုပွီးပြျောရှငျဖှယျကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။